समयले देउवालाई दोहोर्‍याएर महान हुने मौका दिएको छ | सिमान्तMarginal समयले देउवालाई दोहोर्‍याएर महान हुने मौका दिएको छ – सिमान्तMarginal
समयले देउवालाई दोहोर्‍याएर महान हुने मौका दिएको छ
Posted on 8 Mar 2016 8 Mar 2016 by Jesi for INCOMESCO
हालै सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको चुनावमा नव निर्वाचित सभापति शेर ब देउवा प्रति हार्दिक वधाई एवं विजय घोषणाको प्रतिक्षामा रहेका सबैमा शुभकामना ।
यस अवसरमा केहि कुराहरु मनन योग्य छन । हाम्रो स्वभावमा परिवर्तन हुन जरुरी छ । खण्डित पार्न खोजिएको देश र पराजित हुदैगएको राष्ट्रियताले जित्नु पर्नेछ, ब्यापक अभाब छ- आपूर्ति बढाउनु पर्नेछ, आन्तरिक कलह मिलाउनु पर्नेछ, बाह्य जगतसँग खुम्चिएको सम्बन्ध बिस्तार गर्नु पर्नेछ, दलहरू बिच बिश्वास आर्जन गर्ने र पार्टी भित्रको भागबण्डा समाप्त गर्नु पर्नेछ । नेपाल र नेपालीले जित्नु पर्ने कुराहरु चाङ लेगेर बसेका छन । यो नै तमाम नेपालीको सरोकार हो । चुनौति थपिएका छन ।
अहिले जित हार जे देखिंदै छ त्यो त हाम्रा मनमा तैरेको रंगीन तरंगहरू मात्र हुन, सपना जस्तै । यो त विजयको लागि यात्रा मात्र हो, युध्द जित्न हिंडेका सिपही अघि लागे जस्तै । यौटा सेनापतिले युध्द जित्छ जहाॅ ऊ निस्वार्थ लडेको हुन्छ तर त्यही सेनापतिले घरमा एक जना श्रीमतिसॅग हार्छ जहाॅ उसले स्वार्थ राख्दछ ।
कसैले पद पाउनु वा कुनै पदमा व्यक्ति फेरिनुले परिवर्तनको चाहनालाई तृप्त गर्न सक्दैन न त ‘मत’ मा पराजितहरू नै कर्म गर्नबाट पराजित हुनेछन । यहाँ व्यक्ति गौंण हुन्छ । ब्यक्ति साध्य होइन, साधन मात्र हो । त्यसैले कर्ममाथि जित हात पारेर विजय सुनिस्चित गराउने जिम्मेदारी प्राप्त भएको बोधसम्म हुनु यथार्थ हो । त्यसैले यतिखेरको ‘उन्मादी’ र ‘बर्वादि’ का आबेगहरु मानव चेतनाको दुरुपायोग हो, हीन भाव हो ।
प्रजातन्त्र हो, जित हार त हुन्छ नै । प्रजातन्त्र नै हो जित हार स्विकार्न नसक्ने झेलका खेलहरु पनि हुन्छन । त्यसैले यसको आदर्शलाई बचाएर भावी पुस्तालाइ पिडा मुक्त गर्ने जिम्वेवारि पनि सहभागिहरुकै हो ।
समयले एक पटक सबैलाई ‘महान’ हुने अवसर दिएको हुन्छ- केवल सदुपयोग गर्ने नगर्ने क्षमताको कुरा मात्र हो । शेर बहादुर देउवाका लागि त्यो अवसर फेरी एक पटक आएको छ, शायद समयले उनैलाई पर्खिरहेको थियो । उनी भाग्यवानी पनि हुन । ठुलो मान्छे भईसकेका पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई असल बन्ने क्षमता मिलोस । राम्रा दिनहरुको आशा गरौँ । असल बिचार र शु-यात्राका निम्ति सबैमा शुभकामना !
सुशिल कोइरालाबाट शेर ब देउवामा सरेको नेत्रित्व कता जाला ?
Posted in नेपाली कङ्रेस, बिकास, बी पी कोइरालाTagged नाकावन्दी, नेपाल, नेपालको राजनीति, नेपाली कङ्रेस, नेपाली जनता, प्रजातन्त्र र बिकास, मेलमिलाप, षड्यन्त्र, संघियता, संबिधानLeaveacomment
Previous PostढोङNext Postलोडसेडिङ् थपिंदै, लघुविद्युत योजनाहरु भने भटाभट बन्द